I-World Health Organisation: Kusukela nge-10:00 ngomhla wama-28 we-European Central Time (16:00 ngomhla wama-28 wesikhathi saseBeijing), inani lamacala aqinisekisiwe womqhele omusha emhlabeni lenyuke ngamacala ayi-104505 kusuka ngosuku lwangaphambilini lufika kuma-5563631; ukushona kukhuphuke ngamacala angama-4221 kusuka ngosuku olwedlule kuya kuma-353334.
Ngokwezibalo ezikhishwe yiJohns Hopkins University e-United States, kusukela ngoMeyi 28 ngo-15: 32 EST, inani elandayo lezigameko ezisanda kutholakala zenyumoniya e-coronary e-United States lafika ku-17,12816, futhi isibalo sabantu abashonile esifikile 101,196. Emahoreni angama-22 edlule, kube namacala amasha angama-17,040 aqinisekisiwe nokushona okusha e-United States. I-United States iyizwe elinobhubhane olubi kunawo wonke emhlabeni, ngamacala ayi-17,195,5 aqinisekisiwe nokufa kwabantu abayi-101,562.
Ubhubhane alukapheli, futhi ukuvikeleka akukwazi ukubhebhetheka! Sebenzisana nokuqapha kanye nokuphatha ukuze unciphise ukuhamba nokungahambi, ukugwema ukukhahlazeka lapho uthatha ibhasi, gqoka imaski enhle ngaphandle kokukhathalela, ungagcini amehlo nekhala, ungene egumbini lokushintshiselana nomoya, ube nebanga lokudlela e-canteen , geza izandla njalo ukuze ushintshe izingubo njalo, bese uya kudokotela ngaphambi kwesikhathi uma kunezimpawu.
EARLOOP FACE MASK NON-WOVEN 3LAYERS FACE MASK WITH FDA APPROVAL
1. Izendlalelo ezi-3
2. I-antibacterial, uthuli-ubufakazi
3. Yiba nokusungula okwanele